ka shaqaynta guriga
Isgaarsiintu waxay u ogolaataa shaqaalaha inay ka shaqeeyaan guriga ama meel kale oo fog mar ama mar kasta.
Waxay kordhisaa haynta, hoos u dhigida kharashaadka wareejintu Waxay kordhisaa safiga safiga ah
Shaqaaluhu waxay shaqayn karaan saacado badan ka hor inta aanay la kulmin khilaaf shaqo/qoyseed
Waxay kordhisaa daacadnimada shaqaalaha
Waxay dhimaysaa hantida ma-guurtada ah iyo kharashaadka sare
Waxay kaydisaa lacag marka ay jiraan xaalado degdeg ah iyo khalkhal la xidhiidha cimilada
Waxay yaraysaa wararka daalka jirka iyo maskaxda
Waxay siisaa faa'iidooyin waaweyn shaqaalaha naafada ah ama kuwa ku meel gaarka ah
Intaa waxaa dheer, cilmi-baaristu waxay muujisay in doorashada shirkadu si ay u bixiso taageerada nuujinta oo la xoojiyay ay sidoo kale u tarjumeyso qanacsanaanta shaqada, kor u kaca niyadda, iyo wax soo saarka wanaagsan.
Markaa HealthPartners waxay iibsadeen bambooyinka naasaha heerka cusbitaalka waxayna dhigeen qolal badan oo ka mid ah qolalka nuujinta. Matoorada heerka isbitaalku aad ayay uga waxtar badan yihiin ugana waxtar badan yihiin xitaa kuwa ugu wanaagsan ee macaamiisha ah. Shirkaddu waxay siisaa shaqaale kasta oo nuujinaya qalab shakhsi ahaaneed oo looga baahan yahay isticmaalka bambooyinka heerka-cisbitaalka, iyo sidoo kale nadiifinta habboon ee hubinta badbaadada shaqaalaha.
Ka Shaqeynta Qaabka Siyaasadda Guriga (workable.com)